चुनावी तालमेलः मापदण्ड बनाउँदै गठबन्धनका दल
काठमाडौं । सत्तासाझेदार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका साथै माओवादी केन्द्र र
०७८ भित्रै काठमाडौं आउला त मेलम्चीको पानी ?
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले मंगलबार मात्र यही चैत महिनाभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई खुवाउने सपना यही चैत मसान्तसम्ममा
स्थानीय चुनावमा जित्ने दलहरुको कसरत यस्तो छ
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल गठनबन्धन निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । सत्तारूढ चार दलले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने आन्तरिक छलफलमा रहेकै
सवारी लाइसेन्स परीक्षाः पासलाई फेल र फेललाई पास
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरेको अभियोगमा ९ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले लाइसेन्स परीक्षामा पास भएकालाई फेल र
१० जिल्लामा बर्डफ्लु फैलियो, नियन्त्रण गर्न जनशक्ति र रकम अभाव
काठमाडौं । १० जिल्लामा बर्डफ्लु देखिएको छ। हालसम्म बर्डफ्लु नियन्त्रणमै रहेको दाबी गरिए पनि यही क्रममा बढ्दै गए कठिन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बर्डफ्लु तीव्र रूपमा फैलन थालेकाले
६ महानगरपालिकामा गठबन्धनबीच तालमेलको तयारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौंसहित मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग तालमेलको तयारी गरेको छ। कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूसँग तालमेल
सर्वोच्चमा सुनुवाइः होला त खारेज संवैधानिक नियुक्ति ?
काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बनेको संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक नियुक्तिबारे सुनुवाइ गर्न बसेको इजलासमा शुक्रबार
निर्वाचन आचार संहितामा ठूला दलको चर्को असन्तुष्टी
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् । आयोगले स्थानीय
आठ महिनामा साढे ४ खर्ब बढी कर्जा
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब १२ करोड निक्षेप थपिएको छ । सोही अवधिमा कर्जा भने ४ खर्ब ५१ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ
स्थानीयन तह निर्वाचनः ७९ दलले भाग लिन पाउने
काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ११ र १२ वैशाख २०७९ मा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता अर्थात् उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार स्थानीय